မေးခွန်း-အဖြေ မကြာခဏတွေ့ရသောသားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထုတ်ခြင်းနှင့်ပက်သက်၍ - intouchmedicare
Last updated: 2022-05-22 | 1843 ကြည့်ရှုခြင်း |
သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထုတ်ခြင်းသည်နည်းသစ်ဖြစ်သောကြောင့် နားမလည်သူအများစုအားကြောက်လန့်စိတ်ကိုဖြစ်စေပါသည်။ ထိုကြောက်စိတ်ကြောင့်သံသယအမျိုးမျိုး၀င်နေသောအချက်များအားလျော့ကျစေရန် နှင့် စိတ်၀င်စားသောအမျိုးသမီးပျိုမေများအတွက်(သို့) သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းပြီးသောအမျိုးသမီးများနှင့်သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထုတ်ရန်အချိန်ပြည့်ရန်နီးပြီဖြစ်သောသူများ အသုံး၀င်သောအချက်အလက်များအားပိုမိုသိရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့မှသားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထုတ်ခြင်းနှင့်ပက်သက်၍မကြာခဏတွေ့ရတတ်သေအမေးအဖြေများအားစုဆောင်းတင်ပြထားပါသည်။
1. သတ်မှတ်ထားသောရက်အားကျော်လွန်၍တားဆေးပစ္စည်းအားမထုတ်ပါကမည်သို့သောဆိုးကျိုးများဖြစ်နိုင်သည် လား (သို့) မဖြစ်နိုင်
အများအားဖြင့်လူအများစုပထမဉီးဆုံးမေးတတ်သောမေးခွန်းမှာ သတ်မှတ်ထားသောရက်အားကျော်လွန်၍တားဆေးပစ္စည်းအားမထုတ်ပါကမည်သို့သောဆိုးကျိုးများဖြစ်နိုင်သည်လား(သို့)မဖြစ်နိုင်သည်လားဟူသောမေးခွန်းပင်ဖြစစ်ပါသည်။သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထုတ်ဖို့အတွက်အချိန်ပြည့်ရန်နီးပြီဖြစ်သောသူများမထုတ်ခဲ့သော်ဆိုးရွားသောထိခိုက်မှု့ကိုမဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း စမ်း၍မရေဆေး၏ထိရောက်မှု့အာနိသင်ကျဆင်းင်္ပြီးကိုယ်၀န်ရှိခြင်းမှမတားနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် မထုတ်ပဲအချိန်ကြာမြင့်စွာပစ်ထားပါက အမာရွတ်ဖြစ်ကျန်ပြီး အချိန်ကြာမြင့်လေထုတ်ရခက်ခဲလေဖြစိပြီးခွဲစိတ်ရသည့်အဆင့်ထိဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်အချိန်ရှိပါကသားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထုတ်ခြင်းကပိုကောင်း၍ကျွန်ုပ်တို့ ၏ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း၌လည်းမည်သည့်အရာကိုမဆိုမထားခြင်းကပိုကောင်းပါသည်။
2. သတ်မှတ်ထားသောရက်ထက်စော၍သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထုတ်ခြင်းရပါသလား (သို့) မရ
အကယ်၍သင်သည်သတ်မှတ်ထားသောရက်ထက်စော၍သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထုတ်ချင်ပါက ကျိန်းသေထုတ်၍ရနိုင်ပါသည်။ကလေးယူရန်အစီအစဉ်ရှိ၍သော်၄င်း(သို့)အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်လာသောကြောင့်ထုတ်ချင်၍သော်၄င်း သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အထိစောင့်ရန်မလိုပဲ လိုအပ်သလိုသားဆက်ခြားတားဆေးပစ်စည်းထုတ်ရန်အတွက်ဆရာ၀န်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။သို့ပေမဲ့ ၄င်းကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သောဆရာ၀န်(သို့)သူနာပြုဆရာမများကသာထုတ်ပေးသင့်ပါသည်။
3. ထည့်သွင်းထားသောသားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်း မတွေ့တော့သောအခါဘာလုပ်ရမလဲ
သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထည့်ပြီးနောက် ထိုဆေးချောင်းလေးအားစမ်း၍မရနိုင်ခြင်းမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ခန္ဓာကိုယ်ရှိဆဲလ်တစ်ရှူးများမှရစ်ပတ်ထားသောကြောင့်ဆေးချောင်းမှာရွေ့လျားခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်စမ်း၍မရနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးသည် ပုံမှန်ဖြစ်တတ်သောအခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါသည်။စမ်း၍မရပေမဲ့လည်းတားဆေး၏ထိရောက်မှု့အာနိသင်အားလျော့ကျစေခြင်းမရှိနိုင်ပါ အကယ်၍စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်နေသေးပါက အာထာစောင်းရိုက်ကြည့်ရန်အတွက်ဆရာ၀န်နှင့်တွေ့နိုင်ပါသည်။
4. သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထုတ်ပြီးနောက် မည်သို့လိုက်နာသင့်ပါသလဲ
သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထုတ်ပြီးနောက် အခြားအနာများအားကုသကဲ့သို့အနာအားကုသကြည့်ရှု့သင့်ပါသည်။အနာအားသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း ရေမထိစေခြင်း ပုံမှန်မဟုတ်သော ရောင်ရမ်းခြင်း၊ပြည်တည်ခြင်း၊ပိုး၀င်ခြင်းရှိ မရှိအားသတိထားစောင့်ကြည့်သင့်ပါသည်။အကယ်၍ပုံမှန်မဖြစ်ပါက၄င်းသည်အခြားအကြောင်းများကြောင့်(သို့)ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်း ဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ရန်ဆရာ၀န်နှံင့်လာရောက်တွေ့ဆုံ၍စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
5. သားဆက်ခြားတားဆေးပစ်စည်းထုတ်ပြီးနောက် ဘယ်အချိန်တွင်လိင်ဆက်ဆံနိုင်ပါသလဲ
သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းခြင်းသည် လိင်ဆက်ဆံခြင်းအားဟန့်တားစရာမလိုသောတားခြင်းမျိုးဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့် သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းသောအချိန်(သို့)သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထုတ်သောအခါတွင်လည်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းအားမထိခိုက်နိုင်ပါ။သို့ပေမဲ့.သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထုတ်ပြီးနောက်တွင်ဒဏ်ရာအားပြင်းထန်သောထိခိုက်မှု့မပြုသင့်ပါ။ညိုခြင်း၊ရောင်ရမ်းခြင်းများကြောင့်ပိုး၀င်တတ်မှု့ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်နှင့် ကလေးမယူချင်သေးသောသူများသည်သင်လိင်ဆက်ဆံသည့်မခါတိုင်းအခြားတားဆေးနည်းလမ်းအားသုံးသင့်ပါသည်။
6. သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထုတ်ပြီးနောက် မည်သည့်အချိန်တွင်ကိုယ်၀န်ဆောင်လို့ရနိုင်ပါသလဲ
သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထုတ်ပြီးနောက် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှဟော်မုန်းဓာတ်ပမာဏအားလျင်မြန်စွာညှိပေးပါသည်။၄င်းသည် 1 လအတွင်းပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နိုင်ရန်နှင့်အမျိုးသမီးအများစုသည်3လအတွင်းမျိုးဉပြန်ထွက်နိုင်သဖြင့်ကိုယ်၀န်ရရန်အခွင့်အလမ်းပိုများပြီး အခြားတားဆေးများအားအသုံးပြုခြင်းထက်ပိုမြန်ပါသည်။သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းသုံးခြင်းဖြင့် ကလေးရရန်ခက်ခဲမှု့အတွက်လည်းစိတ်မပူရပါ။
သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထုတ်ခြင်းနှင့်ပက်သက်၍မကြာခဏတွေ့ရတတ်သောအမေးအဖြေများအားစုဆောင်းတင်ပြပြီးနောက် အမျိုးသမီးများအားလုံးအတွက်အနည်းနှင့်အများအကျိုးရှိစေမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။အကယ်၍သံသယဖြစ်သောအချက်များရှိပါက(သို့)အသေးစိတ်ထပ်မံမေးမြန်းလိုပါက သင့်အိမ်အနီးနားရှိIntoucMedicareဆေးခန်းဌာနခွဲတိုင်းသို့ ခေါ်လာ၍တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။မိမိနှင့်နီးသောဆေးခန်းဌာနခွဲအား Google တွင်ရှာခြင်းဖြင့် (သို့)Website ၀က်ဆိုက်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့မှကျွမ်းကျင်သောအထူးကုဆရာ၀န်အဖွဲ့များနှင့် တိကျလုံခြုံစိတ်ချရပြီးထိရောက်သောကုသမှု့များဖြင့်အဆင်ပြေအကျိုးရှိစေရန်လျင်မြန်စွာဖြင့်၀န်ဆောင်မှု့များအားပေးနေပါသည်။
คำถามที่พบบ่อย การถอดเข็มยาคุมกำเนิด မကြာခဏတွေ့ရသောမေးခွန်း သားဆက်ခြားတားဆေးပစ္စည်းထုတ်ခြင်း